Qorshee Booqashadaada Daaweynta Proton-ka ee San Diego - California Proton
Qorshaynta Booqashadaada Daaweynta Proton The San Diego
Waxaad diirada saareysaa bogsashada.
Waxaan diirada saari doonaa inaan dareensanaano gurigaaga.
Bixinta heerka ugu sarreeya ee daryeelka shakhsi ahaaneed kuma eka bukaankayaga. Waxay ku fidsan tahay dhammaan booqdayaashooda sidoo kale. Kooxdayada adeega adeega waxay fahmayaan muhiimada nidaamka taakulaynta bukaankayaga xubnaheena kooxuna waxay sameeyaan waxkasta oo karaankooda ah si ay kaaga caawiyaan diyaarinta hoy iyo gaadiid, waxay soo jeedinayaan qaabab aad ugu raaxeysan karto gobolka San Diego oo kugula xiriiri karto adeegyada ka dhigaya San Diego inay dareemaan sida guriga.
Safarka San Diego & Hoyga
Waxaan leenahay dhowr wada-hawlgalayaal safar oo bixiya qiimeyo gaar ah hoteelada iyo hoyga, iyo gaadiidka ka taga ama ka yimaada daaweyntaada proton therapy ee San Diego. Hubso inaad sheegto Proton Kaalifoorniya markaad sameyso ballan celin si aad wax uga weydiiso sicirka bukaan-dhimista. Guji hoosta si aad u aragto Buuggeena Buugga, Gaadiidka iyo Hagaha Kheyraadka ama soo qaado halkan.
Inta Aad Joogtid
Intii lagu gudajiro daaweynta proton, bukaanjiifka badankood waxay dareemaan caafimaad ku filan inay ku sii wataan jadwalkooda caadiga ah ayna ka faa'ideystaan ​​aagga quruxda badan iyagoo ku raaxeysanaya fanka, dhaqanka iyo jiidashada kale ee deegaanka San Diego.
Jardiinooyinka dabiiciga ah iyo jardiinooyinka
Makhaayadaha iyo nolosha habeenkii
Cayaaraha, nashaadaadka iyo howlaha biyaha
Xeebta Xeebta leh waxaa ku jira inka badan 30 xeebood
Dukaamaysiga Suuqa iyo Dukaamada
Duufaano, jardiinooyin safari ah iyo nolosha badda
Booqasho iyo fiirin
Fadlan naga soo wac at 858.283.4771 macluumaad dheeri ah oo ku saabsan ikhtiyaarada hoy iyo sicir-dhimista.
Fadlan naga soo wac at 858.283.4771 wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan safarka, gaadiidka iyo xulashooyinka wadista maalinlaha ah iyo qiima dhimista.